Ireo mpankafy Vegeta lehibe indrindra Dragon Ball Z Fans dia hankasitraka - Hafa
22+ Vegeta Quotes Dragon Ball Z Fans dia hankasitraka
“Robot adala. Tena mieritreritra ve ianao fa manana vintana hanohitra Super Saiyan toa ahy? Tokony tsy mandeha amin'ny laoniny ny atidohanao. ” - Vegeta
Fikarohana google fotsiny an'ny 'Vegeta' dia mahatratra 25 tapitrisa ny valiny. manaporofo ahoana no malaza Vegeta dia eo amin'ny tontolon'ny Anime.
Somary miavonavona izy, be volo, nefa hendry, manan-tsaina, ary taktika tsara. Ary stratejika koa.
Na dia mampihomehy aza ny maro amin'ny tenin'ny Vegeta, dia misy ny Teny Vegeta izay mahatsikaiky sy manentana ny saina.
Izany no karazana lehilahy rehefa mieritreritra izany ianao.
Andeha hojerentsika ny sasany Andalana tsara indrindra Vegeta ao amin'ny Dragon Ball Z / DB Super.
1. Vegeta Quotes
“Tsy matahotra an'ity fanamby vaovao ity aho. Toy ny mpiady marina aho hitsangana hitsena azy. ” - Vegeta
“Ny tanjaka ihany no zava-dehibe eto amin'ity tontolo ity. Ny zava-drehetra dia lesoka fotsiny ho an'ny osa. ” - Vegeta
anime tsara indrindra amin'ny lisitry ny fotoana rehetra
“Aza maniraka ankizilahy hanao asa lehilahy mihitsy.” - Vegeta
'Iray ihany no azo antoka eo amin'ny fiainana. Lehilahy mahery no mijoro eo ambony ka mandresy ny olona rehetra! ” - Vegeta
“Azonao atao ny mifehy ny saiko sy ny vatako, saingy misy zavatra iray tazomin'ny Saiyan hatrany… ny Fiderany!” - Vegeta
'Tsy mety milefitra aminao mihitsy aho!' - Vegeta
“Ahoana no hamelako izany hitranga amin'ny zanako lahy? Nataony sorona ho ahy ny zava-drehetra! Ary tsy nanao na inona na inona aho fa tsy niraharaha azy! ” - Vegeta
seho anime hijerena amin'ny teny anglisy anaram-bosotra
“Isaky ny mahatratra haavo vaovao aho dia misy hery lehibe miseho mihantsy ny fahefako. Toy ny hoe mihomehy ahy ny lahatra miaraka amin'ny tsiky adala be toa an'i Kakarot. ' - Vegeta
“Kakarot… Azafady… Aringano i Frieza… Nataony izay hahatongavako… Aza… avelao izy… hanao izany… amin'ny olon-kafa. Na inona na inona ilaina… Sakano izy… azafady. ” - Vegeta
'Trunk, Bulma, ataoko ho anao ity. Ary eny, na dia ho anao aza, Kakarot. ” - Vegeta
'Tsy misy izany atao hoe ara-drariny na tsy ara-drariny amin'ny ady izany. Tsy misy afa-tsy fandresena, na amin'ny anao, faharesena. ” - Vegeta
“Aiza ny voninahitrao? Toy ny Saiyans madio ra rehetra, Kakarot aleony maty miady toy izay handresy ny iray amin'ireny tsaramaso senzu mahamenatra ireny toy ny sisiny! Kakarot dia niofana tao amin'ny efitrano misy hyperbolic toy ny nataontsika. Andao hojerentsika izao izay azony atao! ' - Vegeta
“Na ny mpiady mahery indrindra aza dia miaina tahotra. Ny tena mahatonga azy ireo ho mpiady tena izy dia ny herim-po ananany handresena ny tahotra. ” - Vegeta
“Mandrosoa ny fanaintainana, mamela ny maharary kokoa.” - Vegeta
'Tsia, tsy afaka resy aho!' - Vegeta
“Fa inona kay Frieza? Ny atidohanao ve iray hafa amin'ny ozatra malemy sy efa zatra anao? ” - Vegeta
anime 20 ambony indrindra amin'ny fotoana rehetra
“Ry vatan-kazo, tsy namihina anao akory aho tamin'ny mbola kely… avelao aho hamihina anao.” - Vegeta
“Avelao aho hanontany anao. Mahatsiravina ve ny masinina toa anao? ” - Vegeta
“Kakarot, manaitra be ianao. Tsy niatrika velively nanohitra an'i Buu aho, ianao irery no afaka miady aminy. Mihevitra aho fa azoko ihany amin'ny farany ny tsy fahaizan'ny genius toa ahy mihoatra anao. Noheveriko fa noho ianao manana zavatra harovana. Noheveriko fa ny fiarovanao hiaro anao dia namela anao hanararaotra ny fahaizanao… mety ho antony io, saingy tsy izaho koa no manana an'io kapila io. Niady hanao izay tiako aho, satria nahafinaritra ahy ny namono ny fahavaloko sy namahana ny avonavoko. Hafa ihany anefa izy, miady izy tsy handresy fa satria tsy ho resy tanteraka izy, nahatonga azy hanapaka ny fetrany ary tena tsy miraharaha izay mpanohitra azy izy. Ka rehefa tsy novonoiny aho, dia satria hitany fa afaka mikarakara ny hafa aho, toa ahy izao… Mandehana Kakarot, ianao no voalohany! ' - Vegeta
“Sarotra amiko ny hino fa ao amin'ny vatanao ny sela. Ahoana no nahitanao fa ratsy tarehy be toy izany? Fa very maina. Na izany aza, miharihary ny toerana nahazoanao ny herinao indrindra. ' - Vegeta
“Nokapohiny tanteraka aho. Voalohany amin'ny asany manokana ary avy eo amin'ny alàlan'ny zanany lahy. Ary inona no navelany ho ahy eto? Ahoana? Ahoana no hahafatesanao toy izany? Ahoana, Kakarot? Tsy hanana vintana mihitsy aho… hanaporofo ny heriko aminao. Maty tsy nisy tahotra ianao. Inona no vokatr'izany amiko? Tsy mpiady aho. Ary tsy hiady intsony aho. ” - Vegeta
“Vonona ny hijoro hery tsy hita nandritra ny an'arivony taona maro ve ianao izao?” - Vegeta
Inona avy ireo teny nalaina Vegeta tianao indrindra?
27+ Akanjo Dragon Ball Z T lehibe ho an'ny fitafianao
60 amin'ireo sombin-tsarimihetsika Dragon Ball Z lehibe indrindra amin'ny fotoana rehetra
Ny teny angano tena malaza indrindra
tsy maintsy mijery anime amin'ny fotoana rehetra
anime 50 ambony indrindra amin'ny fotoana rehetra
10 andiany anime tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra